Hidhaa fi Doorsisi Nutti Hammaate: Jiraattota Godina Gujii
Laga Gannaalee, naannoo magaala Adolaa, Gujii, Caamsaa 2016
Godina Gujii aanaa Aagaa Waayyuu keessaa uummanni amma iyyuu hidhamuun itti fufee jira jedhu jiraattonni. Dubartiin ilmee garaa qabdu utuu hin hafin sababaa miseensa maatii isaanii keessaa barbaadaman dhiyeessaa jedhuun namoonni hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu dubbatu jiraattonni.
Namoonni kana dura filannoo keessatti hirmaatan, kanneen miseensota Kongresii Federaalawaa Oromoo turanii fi mormiiwwan kana duraa keessatti hirmaatan jedhan kan argatan qabanii kanneen argachuu dhaban immoo maatiiwwan isaanii hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatu jiraattonni.
Kanneen hidhaa dhaa gad dhiisaman illee akka jedhame leenjii qofa utuu hin taane reebichaa fi dararaatu irratti raawwatamuu nutti himan jechuun jiraattonni dubbataniiru.
Waajjirri bulchiinsa nageenya aanaa Aagaa Waayyuu garuu himannaa sana haaluu dhaan naannoo keenyaa nama hiikamaa jiru malee kan hidhamaa jiru hin jiru, nageenya guutuu qabna. Uummatis gara misoomaatti fuula deebifatee jira jedha.
Bara 2016 kana atileetota haaraa kuma hedduutti addunyaatti gadi yaahe.Dorgommii Ispoortii baranaa keessaa tamti qalbiitti isan hafe?
Hidhamtoonni Qilinxoo Gubdan Jedhamanii Himataman Gochaa Suukkanneessaa Mana Hidhaatti Irratti Raawwatame Kaleessa Mana Murtiitti Himatan
Gabayaa Berlin,Jermen nama 12 keessatti fixan taan amma ya bananii mirgaa bitaan dallaa dhagaa itti jaaranii eeguutti jiran
Sheekotii Somaalee akka dubartiin biyya isaanii kubbaa saaphannaa hin taphanne jabeessani itti dhaaman